काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा मंगलबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।
केन्द्रीय समितिले तय गरेका आन्दोलनका कार्यक्रमबाहेक भ्रातृ संगठन, जिल्ला समिति तथा शुभेच्छुक संगठनहरूले आवश्यकता अनुसार विरोधका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले गराए ।
<<< : ‘कोभिशिल्ड’ खोप अभियान, कस्ता व्यक्तिले लगाउन हुँदैन ?
‘कोभिसिल्ड’ खोप अभियान सुरु, पहिलो खोप डा. सागर राजभण्डारीलाई : >>>
संसद बैठक फागुन २३ गते अपराह्न ४ बजे बस्ने
सर्वोच्चमा दाहालको जवाफ: ‘अदालतको हवहेलना गरेको छैन’
संसद् पुनर्स्थापनापछि सरकार झनै बलियो भयो : सुवास नेम्वाङ